Izindaba - Ukusetshenziswa kukalamula osheshayo
I-QUICKLIME ikhiqizwa nge-limestone equkethe inhlanganisela yama-calcium ne-magnesium carbonates.
Kokubili i-calcium quicklime kanye ne-dolomitic quicklime ephezulu kukhiqizwa ngokushisa ama-limestone eluhlaza emgqonyeni kuze kufike emazingeni okushisa angama-900 degrees. Le nqubo ibizwa ngokuthi inqubo yokubala.
Imikhiqizo esheshayo ivamise ukwenziwa amandla amahle abizwa ngokuthi yi-PULVERIZED QUICKLIME elungele ukuxutshwa nezithasiselo noma ezinye izinto ukuze kuholele ekwakhiweni okukhethekile okuhlanganisiwe. Ngenxa yesimo samakhemikhali sezithasiselo ezithile, i-quicklime ingaba yi- "Fluidized", okusho ukuthi, inezici zokuba noketshezi oluningi. I-quicklime ene-fluidized ilungele ukusetshenziswa nezinhlelo ezikhethekile zokuphatha izinto ukuze kutholakale kahle futhi kugweme ukuvaleka.
I-Quicklime nayo ingafakwa amanzi ngamanzi, ngenqubo eyaziwa ngokuthi yi-slaking, okuholela ku-HYDRATED QUICKLIME (noma i-calcium hydroxide), umkhiqizo owomile wempuphu ogeleza mahhala osebenzayo futhi osebenza kahle ekusetshenzisweni okuningi.
Futhi ingasetshenziswa njengama-reagents e-analytics, reagent ye-spectral analysis, indlela ye-phosphor. Isixazululo esisizayo, ama-ejenti we-oyela wemifino wokunquma, ukuhlaziywa kwegesi, okusetshenziswa kwi-carbon dioxide Ama-reagents amaningi asetshenziswa ekukhiqizeni ama-semiconductor we-denotation, nenqubo yokusabalalisa.
1) Sebenzisa ohlotsheni ngalunye lokuphakelayo okunezithako ezinamanani afinyelela kuma-55.6 ngenhla hhayi izakhi eziphikisayo
2) Nge kwenza isitshalo sepulasitiki, ifektri yenjoloba, ifektri yokumboza, impahla engangeni manzi yesitolo kanye nezindonga zangaphakathi nezangaphandle zimhlophe. I-Albedo ingaphezu kwama-degree angu-85.
I-3) Isebenzisa ekwenzeni amabhakede ebhodini, iwela emanzini ipayipi, imboni yamakhemikhali. I-Albedo ingaphezulu kwama-degree angama-93.
I-4) Ingasebenzisa emzimbeni wokunamathisela amazinyo, insipho. U-Albedo ngezinga elingu-94 ngenhla
I-5) Isebenzisa irabha, ipulasitiki, ikhebuli kagesi, i-pvc albedo ku-94 degree ngaphezulu kwe-
I-6) i-PVC, i-PE, upende, umkhiqizo wezinga lokumboza, isisekelo sokwenza iphepha sisakazeka, indawo yokwenziwa kwephepha isakazeka, i-albedo ngaphezu kwama-degree angama-95. Inayo, i-albedo ephezulu, engeyona enobuthi, i-odourlessness, izinto zikawoyela ezincanyana zokuba msulwa kakhulu, izinga lobulukhuni liphansi.
Calcium oxide Futhi Calcium Hydroxide, Ukwenza i-Calcium Hydroxide, Igama Lwebhizinisi LeCalcium oxide, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide Production Line, Ukwenza I-calcium Hydroxide,